Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo maanta lagu wareejiyey daawooyin – Radio Daljir
Oktoobar 11, 2012 7:57 b 0
Garowe, Oct, 11 – Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa maanta lagu wareejiyey illaa 4 tan oo ka kooban daawooyin kala duwan, kuwaas oo loogu talo-galay in si lacag la’aan ah loo gaarsiiyo dadka danyarta ah ee ku nool gobollada Puntland.
Daawooyinkaan oo isugu jira daawada dhiikarka, ?Sonkorta, ?dhimirka, kaadi- haysta iyo weliba qeybo kale ayaa waxaa wasaaradda caafimaadka ku wareejisey hay’adda (Bir jeewo) oo ah hay’ad fadhigeedu yahay dadka Talyaaniga, waxaana daawooyinkaan loo qeybin doonaa isbitaallada dawliga ah ee ku yaal deegaannada Puntland is ay bulshadu u helaan adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah.
Wasiirka caafimaadka Puntland dr Cali C/laahi Warsame oo saxaafadda kula hadlay xarunta wasaaradda caafimaadka ee Garoowe ayaa ka mahad celiyey daawooyinka maanta lagu wareejiyey, isagoona tilmaamay in wasaaraddu ay xil weyn iska saari doonto sidii bulshada loo gaarsiin lahaa daawooyinkaas, Wuxuuna intaas ku daray in daawooyinkaani ay kusoo beegmeen xilli baahi weyn loo qabay.
Wasiirka ayaa sheegey in marka ugu horreysa laga qeybin_doono ilaa shan isbitaal oo kala ah, isbitaallada Garoowe, Boosaaso, Gaalkacyo, Qardho iyo isbitaalka degmada Baran, iyadoona lagu xejinayo isbitaalada kale ee ku yaal degmooyinka Puntland.
Daawooyinka maanta lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka puntland ayaa kusoo beegmaya xilkli isbitalka Garowe ay ka jirto cabashooyin la xiriira dhanka daawada.
Cabdi Xassan Rooble